မက္ကဆီကိုရှိ Motorola One သို့ Android 9.0 Pie ရောက်ရှိ Androidsis
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Motorola ကစတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည် Android Pie update သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် Android One ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Motorola One Power ပေါ်မှာ။ အခုတော့ အဆိုပါ update ကိုထွက်မှထွက်လှိမ့်သည် Motorola Oneပထမ ဦး ဆုံးဖော်ပြခဲ့သောတွေ့ရှိချက်များထက်ပိုမိုတိုတောင်း။ အစွမ်းထက်သောဗားရှင်းဖြစ်သည် စပိန်မှာရရှိနိုင်ပါ y အမေရိကန်.
XDA-Developers အဆိုအရ အဆင့်မြှင့်တင်မှုသည်မက္ကဆီကိုတွင်ပထမဆုံးဖြစ်သည်အမေရိကန်အလယ်ပိုင်းအတွက်ကောင်းသည် Android Pie မှစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များအပြင် adaptive battery၊ adaptive brightness နှင့် navigation အသစ်များကို အသုံးပြု၍ အညွှန်းအသစ်တို့ကဲ့သို့ update သည်နိုဝင်ဘာလအတွက်သက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေး patch ကိုပါထည့်သွင်းပေးသည်။
ထုံးစံအတိုင်း, update ကိုအသုတ်အတွက်ထွက်လှိမ့်သည်နှင့်မကြာမီအခြားဒေသများမှလာမယ့်လိမ့်မည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည် OS ၏ဤဗားရှင်းသည်မိုဘိုင်းသို့ရောက်ရှိခြင်းကိုသတိပြုရမည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကျနော်တို့သွားရမယ် configuration ကို o setting များကိုထို့နောက်ဝင်ရောက်ပါ System Updates ထို့နောက်၎င်းကိုရရှိနိုင်မှုကိုစစ်ဆေးပါ။ မရရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ရှည်ဖို့လိုသည်၊ ၎င်းသည် Motorola One ဖုန်းများအားလုံးသို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ (ရှာဖွေရန် - Motorola One, ဒီ Motorola ဈေးနှုန်းချိုးဖောက်မှု၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ).
ဒီအလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းရဲ့အင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအနည်းငယ်မျှလေ့လာကြည့်လိုက်သည် Motorola One တွင် ၅.၉၉ လက်မအရှည် HD + မျက်နှာပြင်ရှိသည်ရှစ်ခုပရိုဆက်ဆာ Snapdragon 625 ပရိုဆက်ဆာနှင့် RAM4GB ထည့်သွင်းထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် 64 GB GB သိုလှောင်မှုပမာဏကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် microSD ကဒ်အထိုင် ၂၅၆ GB အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်။
ကင်မရာဌာနမှာ ဖုန်းရဲ့ကျောဘက်မှာ 13 နဲ့2MP combo ပါ ၀ င်ပါတယ် 8 MP အာရုံခံကိရိယာသည် selfie ရိုက်ကူးခြင်း၊ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုခြင်းနှင့် Face unlock ပြုလုပ်ခြင်းတို့အတွက်ရှေ့မျက်နှာစာတွင်ထိုင်နေစဉ်လက်ဗွေစကင်နာနှင့်အတူ။ ထို့အပြင်ဖုန်းတွင် 3,000 mAh ဘက်ထရီရှိပြီး Motorola ၏ 15 W TurboPower မြန်သောအားသွင်းနည်းပညာနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Motorola One သည်မက္ကဆီကိုရှိ Android Pie ကိုစတင်ရရှိခဲ့သည်
Android ဖုန်းအသစ်လား။ ဒါကြောင့်သင်ကဒီအက်ပလီကေးရှင်းတွေလိုတယ်